Vaovao - Wonder Woman 1984 dia mampiseho ny tena toetran'ny olombelona ary mizaha ny tanjaka anaty avy amin'ny tantaran'ny fitomboana
Wonder Woman 1984 dia mampiseho ny tena toetran'ny olombelona ary mizaha ny hery anaty avy amin'ny tantaran'ny fitomboana
Wonder Woman 1984 dia ao amin'ny famoahana mafana ao amin'ny sinema anatiny. Androany, horonantsary miresaka am-bava no nasehon'ilay mpamokatra sarimihetsika. Ity tantara mahavaky fo sy mafampana amin'ny fitomboan'ny Wonder Woman ity dia tena lalina tokoa ka tsy azon'ny olona atao. Ny sary mihetsika dia misoroka ny endrika "endrika endrika", maneho mazava ny "maha-Andriamanitra" sy "maha-olona" an'i Wonder Woman, ary mahatonga ny tarehin-tsoratra ho tena misy sy mahery. Araka ny filazan'ny talen'ny Patty Jenkins, "Afaka mahita ny toetrantsika isika ary mahatakatra sy mahatsapa ny olona rehetra amin'ny tantara." Rehefa manakaiky ny Krismasy, ny hafanana sy ny firaiketam-po ampitain'ny sarimihetsika dia ho fanomezana tso-po ho an'ny mpijery rehetra ihany koa.
Wonder Woman Diana dia tandindon'ny "Andriamanitra" foana. Izy dia be hatsaram-panahy, manan-tsaina, mahery, be fitiavana ary tsy resy. Nefa ao amin'ny Wonder Woman 1984, i Diana dia nanambara ny lafiny miafina ny tenany - fa izy, tahaka ny olombelona, ​​dia afaka mijaly noho ny fahatsapana maharikoriko ary ho voadona eo amin'ny fitiavana sy ny fahamarinana.。Io "tsy fahalavorariana" io dia mahatonga azy ho tia kokoa. Gal Gadot indray mandeha dia nanao resadresaka nifanaovana tamina resadresaka iray: "Wonder Woman dia manana ny fahalemeny, ary io fahalemena io ihany izay manampy ahy hanamora kokoa azy sy hangoraka." Ny kaonty ofisialin'ilay sarimihetsika, “misy sarimihetsika”, dia mamaritra ny Wonder Woman ho “be fangoraham-po sy mafana.” Misy ihany koa ireo mpankafy nilaza fa ny sarimihetsika dia nanala ny akorany mahery indrindra, naneho an'i Wonder Woman ho “olona” manana fihetseham-po lalina indrindra ny fihetsem-po, dia tsy nampoizina tanteraka.
Ho fanampin'izany, ny sarimihetsika dia mampiseho olon-dratsy roa, Barbara the Leopard vehivavy sy Max Lord, amin'ny ambaratonga maro. Ny fanovan'ny vehivavy panther avy amin'ny "mangarahara kely" ara-tsosialy ho mpiremby ambony amin'ny sehatra miaraka amin'i Wonder Woman dia avy amin'ny ampahany lehibe Ny fanamavoana azy dia nijaly indray mandeha, ary ny fahatsapana tsy fahombiazana tsapany rehefa nanao faniriana nahasarika ny sainy izy. Max Lord, ilay olon-dratsy hafa, dia olona mampalahelo ihany koa. Te hahazo ny fankatoavan'ny zanany amin'ny alàlan'ny toerana sy ny harena izy, saingy ny zavatra sisa ilain'ny zanany lahy dia ny famihina avy aminy. ”Samy olombelona i Barbara sy Lord,” hoy i Pedro PASCAL, izay milalao Lord. “Amin'ny sarimihetsika maherifo, tsy dia mampiasa olona isika hanehoana ny mahery indrindra na ny ratsy indrindra. Samy manana ny maha izy azy ny olombelona na ny tsara na ny ratsy. ”
Notarihin'i Patti Jenkins, “Wonder Woman 1984 ″ dia kintana Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro PASCAL sy ny hafa, ary milalao amin'ny teatra manerana ny firenena ankehitriny.